बैशाख ३, काठमाण्डौ । ‘पहिला देश अनि बिदेश’ भन्ने नाराका साथ गन्तव्य नेपाल ईभेन्ट म्यानेजमेन्टले यही बैशाख १३ र १४ गते तदनुसार (अप्रिल २६ र २७) का दिन आयोजना गर्न लागेको डोमेस्टीक टुरिजम मार्टको प्रचारप्रसार तिब्र पारिएको छ ।
निजि क्षेत्रबाट पहिलोपटक आयोजना गर्न लागिएको मेलाको लागि नेपाल पर्यटन बोर्डको मुख्य प्रवद्र्धन रहेको छ । जसअनुसार हिजो सोमबारबाट मुलुकभरका १०७ वटा एफएम स्टेशनबाट प्रचार प्रसारलाई तिब्र पारिएको छ ।
यसका साथै बिभिन्न समितिमार्फत पनि मेलाको प्रचार तिब्र पारिरहँदा ईभेन्ट म्यानेजमेन्टले गुडविल एम्बेसडर, सहपाटी, सहधर्मी व्यक्ति तथा संस्थाहरु, मिडिया संयोजन समिती लगायतका समुहहरु प्रचारमा तिब्र लागिपरेका छन । यिनै समितीहरु मध्ये डिटीएम एम्बेसडरका रुपमा रहेका व्यक्तिहरु कहाँ के गर्दैछन त बुझ्ने कोशिस गरेका छौ । प्रश्तुत छ युवा पर्यटन व्यवसायी तथा डिटीएम एम्बेसडर गोपाल बाबु श्रेष्ठसँगको कुराकानी ।
म अहिले गोरखा आईपुगेको छु, मेरो जन्मभुमि पनि हो । गाँउपालिकामा सानो काम लिएर आएको ।
के काम ?
केही व्यक्तिगत तथा केही प्रवद्र्धनात्मक सहितका कार्यक्रम
डिटिएमको एम्बेसडरमा मनोनित हुनु भएयता मेलाको प्रचारको लागि के कस्तो काम गरिरहनु भएको छ ?
बिभिन्न जिल्लाका पर्यटन क्षेत्र सम्बन्धीत संस्थाहरुसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने कार्य जारी छ । सरकारले गर्नुपर्ने कार्य निजी क्षेत्रले गर्दै छ, एक जिल्लामा भएका पर्यटीय क्षेत्र, संस्कृति र खानाका परिकार लगायतको जानकारी सबैमा पुर्याउने गरी अघि बढेका छौ ।
तयारी अन्तीम चरणमा पुगीसकेको हुनाले प्रचार गर्नु नै हाम्रो अन्तिम समयसम्मको लक्ष्य हो । कम्तीमा एकै स्थलबाट सबै क्षेत्रको जानकारी सबैमाझ पुग्नेछ, नेपालको पर्यटन सरकारले घोषणा गरेको २०२० भिजनलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्छ । यही हाम्रो बुझाई हो ।